Sawiro+Faahfaahin laga helayo tiro dhalinyaro ah oo muqaal ahaan usoo bandhigay gabar ay ku faraxumeyen Goldogob oo ka tirsan Buntland! | kowtharmedia.com
Home WARAR Sawiro+Faahfaahin laga helayo tiro dhalinyaro ah oo muqaal ahaan usoo bandhigay gabar ay ku faraxumeyen Goldogob oo ka tirsan Buntland!
Sawiro+Faahfaahin laga helayo tiro dhalinyaro ah oo muqaal ahaan usoo bandhigay gabar ay ku faraxumeyen Goldogob oo ka tirsan Buntland!
Tobadayadii ugu danbeeyey ayaa baraha bulshada lagu dhex arkay dhalinyaro muqaal iska duubay kuwaas oo faraxumeeyay gabar Putland ku nool, Waa dhacdo xanuun badan oo ay ka danqadeyn ummada soomaaliyeed.
Mid kamid ah ehelka gabadha oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey dhaliyaradaan falkaan samaysay inay Masuuliinta Putland dhaleen.
Dadka falka geestay iyo Tiro ahaan ayaa lagu sheegay 5qof oo dhalinyaro ah.
Afar wiil oo horay sawiradooda loo soo bandhigay ayaa xaqiijiyey inay yihiin Shan Ruux oo Falka geestay Midka Shanaad Waa qofka ka Duubay isaga Iska ma uusan Duubin Muuqaalkiisa Wuu qariyay balse Xadka Ayaa laga Soo qabtay.
Magacyadooda ayaa lagu sheegay
Yaasir maahir xaashi
C.risaaq xoosh jibriil
Ayaanle maxamuud cali (ayaanle wale)
Shirwac jaamac juunle
Weli kama aysan hadlin maamulka Puntland
Halka shacabku ay ugu baaqayaan in arintaan wax ay ka qabato madama afar isbuuc ka hor ayay ka dhacday Goldogob
Ugu danbeyn midkami ah wiilashan waxaa dhalay Nin Suldaan ah midna wuxuu la Dhashay Xilibaan ka tirsan Barlamanka Soomaaliya.
Wixiii kusoo kordha kala socda wararkeyna danbe
Previous PostHogaamiyaasha Berri ayaa halkaan wax kubarta tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan (Maqaal xiiso leh) Next PostFaahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa doon ku degtey xeebta dalka Libya!!